Semalt: Instagram Vs. स्पाम
इन्स्टाग्राम - केवल अन्य सामाजिक मिडिया खाताहरू र अनलाइन सेवाहरू जस्तै - यसको स्पामको साझेदारी छ। स्पाम खाताहरू जसले स्प्याम फोटोहरू र टिप्पणीहरू मन्त्र गर्दछन्। यो त्यस्तो चीज होईन जुन तपाईं आफ्नो फोटोहरूमा देख्न चाहानुहुन्छ र ती ट्याग हुनुभएको छ। वास्तवमा यो कष्टकर छ। धेरै कष्टप्रद
त्यसोभए, तपाइँ कसरी तपाइँको इंस्टाग्राम खातामा स्पामबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ? पत्ता लगाउन को लागी पढ्नुहोस्।
Semalt बाट अग्रणी विशेषज्ञ र्यान जोनसनले तपाईंको इन्स्टाग्राम खातामा स्प्याम प्रबन्ध गर्ने तरिका वर्णन गर्छन्।
के तपाईंलाई स्प्याम हुनसक्ने शंका गरी रिपोर्ट गरेर शुरू गर्नुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ तपाईं अन्य इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरूलाई स्पाम टिप्पणीहरू र फोटोहरू मार्फत जान पीडित गर्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईं आईओएस प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, आईफोनमा वा आईप्याडमा भन्नुहोस् र त्यसपछि फोटोको टिप्पणी सेक्सनमा जानुहोस्, तपाईंको औंला बाँयामा स्वाइप गर्नुहोस् त्यसपछि उद्गार चिन्ह (!) ट्याप गर्नुहोस् जस पछि तपाईं 'स्क्याम' वा 'स्पाम' ट्याप गर्नुहोस्। Android मा प्रक्रिया थोरै फरक छ। यहाँ, तपाईं टिप्पणीमा जानुहोस्, 'टिप्पणी मेट्नुहोस् र दुरुपयोग रिपोर्ट गर्नुहोस्' क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईंले सक्नुभयो। यी लिन्छन् टिप्पणी को। त्यसोभए, कसरी तपाईं फोटोहरूको साथ तपाईं स्प्यामिंग एक ईन्स्टग्राम खाता रिपोर्ट गर्नुहुन्छ? ठीक छ, माथि दायाँ कुनामा कहीँ तीन थोप्लाहरूमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि 'रिपोर्ट' क्लिक गर्नुहोस् प्रम्प्टहरू पछिको। यस बारे थप इन्स्टाग्रामको मद्दत केन्द्र मा पढ्नुहोस्: दुरुपयोग र स्पाम।
तपाईले एक निजी खाता प्रयोग गर्नका बारे विचार गर्न सक्नुहुन्छ
केहि व्यक्तिले स्प्यामबाट बच्नको लागि निजी प्रोफाइल निजी सेट गर्ने बारे विचार गरेका छन्। यो राम्रो इशारा हो, तर दुर्भाग्यवस, निजी प्रोफाइलहरूले तपाईंलाई ठूला निम्न प्राप्त गर्नबाट रोक्छन्। उदाहरण को लागी, तपाइँको फोटोहरु मात्र hashtags मा देखा पर्नेछ। यसका अतिरिक्त, केहि प्रयोगकर्ताहरू निजी प्रोफाइलहरू मन पराउँदैनन् किनकि उनीहरूमा नराम्रो आश्चर्यहरू हुन सक्छन्। सुरूको लागि, तपाइँले के पोस्ट गरिएको छ देख्न सक्नुहुन्न जब सम्म उनीहरू साथीहरू हुनको लागि तपाइँको अनुरोधलाई अनुमोदन गर्दैन।
तपाईको खातामा सम्झौता हुन नदिनुहोस्
तपाईंको इन्स्टाग्राम खातामा धेरै स्पाम तस्बिरहरू र टिप्पणीहरू तपाईंको खातामा सम्झौता भइरहेको छ भन्ने संकेत हुन सक्छ। कुनै श susp्कास्पद गतिविधिको लागि तपाइँको टिप्पणीहरू नियमित रूपमा जाँच गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। जति जति इन्स्टाग्रामले एक स्वचालित स्प्याम रोकथाम प्रणाली फिचर गर्दछ, यो मूर्ख छैन। टिप्पणीहरू, फोटोहरू, र ट्यागहरू स्प्यामिंग खाताहरूको लागि जाँच गर्न सधैं सम्झनुहोस्। कसैले पनि तपाईका लागि यो गर्दैन। रिपोर्ट गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै मेटाउनुहोस्।